I-India Ithola I-Ellicott Dredges Yokulawulwa Kwezikhukhula kanye nePort Work
I-India Ithola I-Ellicott Dredges yokulawulwa kukaZamcolo kanye nePort Work (1961)
Ukwenza ngcono nokuthuthuka komfula omncane eMachwebeni Amancane eNdiya, okuzothinta kakhulu inqubekelaphambili yezomnotho yesizwe kuzokwenziwa ngamachibi amaningi e-Ellicott.
Amabili ala mayunithi, amamodeli wepayipi le-hydraulic angu-12-intshi wesigaba sika-Ellicott esiphathekayo se “DRAGON”, athengwe nguhulumeni waseJammu noKashmir. Kufanele zisetshenziswe kuphrojekthi yokulawulwa kwezikhukhula eMfuleni iJehlum.
Lo mgwaqo wamanzi, ogeleza eSrinigar Valley eKashmir, ugcwala izindawo eziseduze nezolimo unyaka nonyaka, ukhukhula izitshalo ezibalulekile futhi ushiye abantu abaningi bengenamakhaya. Isikhukhula sibangelwa ukukhuphuka, eminyakeni edlule, kwezinga lombhede womfula okwenza iJehlum ingakwazi ukuphatha umthamo wamanzi amaningi ogelezela kuwo entwasahlobo ngayinye lapho iqhwa elincibilikisa iHimalaya lizungezile. Lesi simo siphinde sikhuliswe yimithombo eminingi ethwala amanzi eqhwa owengeziwe nodaka kusuka emagqumeni aseduze kuya eJehlum.
Izingxoxo zenkontileka zaphothulwa ngummeli ogunyaziwe ka-Ellicott uBlackwood Hodge (India) Pvt. Kanye nama- "DRAGONS," enziwa kancane eNdiya ngumnikazi welayisensi ka-Ellicott, iHooghly Docking and Engineering Company yaseHowrah. Zibekelwe ukusebenza ukuze zikhulise futhi zijulise isiteshi esiphume ngamamayela ayi-17 embhedeni wobubanzi obungamamitha angu-400-450 kanye nokujula okungamamitha angama-22 ngaphansi kwedathasi lamanzi aphakeme. Lokhu kudonswa komfula, okucatshangelwa ukuthi kungena amanzi eqhwa ancibilikayo ngezikhathi ezithile zonyaka, kuzobandakanya ukususwa kwamamidiyidi angama-cubic of solids aphakathi kwezigidi eziyisishiyagalombili nezili-8, ehluka ngohlobo kusuka esihlabathini somfula ojiyile kuya kubumba oluhlanganisiwe nogwadule omncane.
Womabili ama-dredges manje ayasebenza. Owokuqala waqala ukusebenza kulandela imikhosi yokuthunyelwa ehlonishwa ukuba khona kukaNdunankulu uJawaharlal Nehru. Banokumba okujule ngamamitha ama-26, okukhipha okuphezulu cishe kwama-cubic yards angama-250 ngehora futhi bangapompa ngamapayipi ahluka ngobude obufinyelela ezinyaweni ezingama-3,000.
Ukuphatheka kwama-dredges, aqinisekiswe ukwakhiwa kwawo kwengxenye enemeshi, kubonakale kunenzuzo ekulethweni kwawo. Njengoba kwakungekho ukuxhumana kwezitimela kusuka ePathankote kuya endaweni okwakhiwa kuyo iBuramulla, eduze kwaseSrinigar, ikapitol yaseKashmir, kwakudingeka ukuzidlulisa ngeloli ngaphezu kwemigwaqo esezintabeni ejiyile futhi ejiyile. Imigwaqo emincane namabhuloho bekufanele kubhekwe esisindweni nobubanzi bemithwalo yamaloli. Kodwa-ke, ukwakheka okuhlukanisiwe kwama-dredges kwenze ukuthi kuhlangatshezwane nezinkinga zezokuthutha futhi okumba okuntantayo kuthuthelwe endaweni yomsebenzi ngokugculisayo.
Iphrojekthi yamachweba amancane
Intuthuko enkulu yesibili ebandakanya ama-Ellicott dredges ukwenziwa ngcono kwamachweba amancane ama-Minor emaphethelweni asempumalanga nasentshonalanga ye-India, usizo lwawo lukhawulelwe ukunqwabelana kwezigaxa zesanti ezicwilisiwe kanye namathe endaweni yokungena ethekwini. Ukunqoba lezi zingqinamba zokuzulazula, ama-Ellicott amabili angama-intshi angama-22 aklanyelwe ama-dredges amapayipi azisebenzelayo asolwandle. Futhi ezokwenziwa ngokwengxenye eNdiya ngu "Hooghly," inkontileka yabo isayinwe muva nje phakathi kuka-Ellicott kanye ne-India Supply Mission eWashington.
Lezi zingxenye ezimbili zizoba yisisekelo sedamu lamanzi elisungulwe nguHulumeni waseNdiya, uMnyango Wezokuthutha futhi lizozinza emachwebeni aseBombay naseVisakhaptnam. Ngenxa yokwehliswa okudingekayo olwandle oluvulekile, ngaphezu kwezingodo zesihlabathi neziteshi zokungena eziveziwe ziklanywe ngokukhethekile njengokuhamba kolwandle nokuzihambela ngokwakho.
Amachweba Amancane, ogudle ugu olungamamayela angu-3,000 XNUMX eNdiya, aphatha izigidi zamathani empahla minyaka yonke kufaka phakathi ukuthunyelwa okubalulekile kwensimbi yensimbi esezingeni eliphakeme, imanganizi, itiye, ukotini, usawoti, i-bauxite, izikhumba kanye ne-mica. Ukwehliswa okuqhubekayo kokuvumela imikhumbi esalungiswa ngokwanele ukungena emachwebeni ukulayisha izinto ezithunyelwa ngaphandle kubaluleke kakhulu ekuqhubekeni nasekukhuliseni ukuhwebelana kwamazwe omhlaba eNdiya. Lawa ma-dredges azonikela ngezinto ezibonakalayo ekufezeni le njongo.